Izixhobo zoLwazi |
Nika ingqalelo kwisichumiso sezinto eziphilayo
ngomphathi ku 2021-07-21
Ukuphuhliswa kwezolimo oluhlaza kufuneka kuqala kusombulule ingxaki yongcoliseko lomhlaba. Iingxaki eziqhelekileyo emhlabeni zibandakanya: ukuxinana komhlaba, ukungalingani kwamaminerali umyinge wezinongo, umxholo ophantsi wezinto eziphilayo, umaleko wokufama ongekho nzulu, i-asidi yomhlaba, ukungcola komhlaba, ungcoliseko lomhlaba njalo njalo. Ukwenza i ...
Zeziphi iintlobo zezichumisi ezimbaxa
ngomphathi ku 2021-07-15
Isichumisi esihlanganisiweyo sibhekisa ubuncinci kwisibini kwisithathu seetrogen, i-phosphorus, kunye ne-potassium. Sisichumisi semichiza esenziwe ngeendlela zamachiza okanye iindlela zomzimba kunye neendlela zokudibanisa. I-nitrogen, i-phosphorus, kunye ne-potassium indlela yokwenza iileyibhile yomxholo: i-nitrogen (N) i-phosphorus (P ...
Inkqubo yemveliso yesichumiso
Isichumisi esihlanganisiweyo, esikwabizwa ngokuba sisichumisi semichiza, sibhekisa kwisichumisi esiqulathe naziphi na izakha mzimba ezibini okanye zintathu zezakhi zezondlo zezityalo, i-nitrogen, i-phosphorus kunye ne-potassium eyenziwe yimichiza okanye indlela yokuxuba; isichumisi esimbaxa sinokuba ngumgubo okanye iigranti. Isichumisi esimbaxa ...
Gqibezela izixhobo zemveliso kwisichumiso somgquba
Iseti epheleleyo yezixhobo zemveliso yezichumiso zendalo ngokubanzi kubandakanya: izixhobo zokuvumba, izixhobo zokuxuba, izixhobo zokutyumza, izixhobo zegranulation, izixhobo zokomisa, izixhobo zokupholisa, izixhobo zokujonga isichumiso, izixhobo zokupakisha, njl.
Ihagu umgquba isichumiso organic izixhobo ngokupheleleyo
Ukukhethwa kwezinto eziluhlaza kwimanyolo yehagu yesichumiso somgquba kunye nesichumiso se-bio-organic kunokuba ngamanyolo ohlukeneyo emfuyo kunye nenkunkuma yendalo. Ifomula esisiseko yemveliso iyahluka ngokuxhomekeka kuhlobo kunye nezinto zokwenza izinto. Iseti epheleleyo yezixhobo zomgquba wehagu ephilayo kubandakanya ...
Isixhobo semveliso yemveliso yesichumiso
ngomphathi ku 2021-06-29
Ukukhethwa kwezinto eziluhlaza kwizichumiso zezinto eziphilayo kunye nesichumiso se-bio-organic kungangumgquba wemfuyo ohlukeneyo kunye nenkunkuma yendalo. Ifomula esisiseko yemveliso iyahluka ngokuxhomekeka kuhlobo kunye nezinto zokwenza izinto.
Inkqubo yemveliso yezichumiso zendalo
Ukukhethwa kwezinto eziluhlaza kwizichumiso zezinto eziphilayo kunye nesichumiso se-bio-organic kungangumgquba wemfuyo ohlukeneyo kunye nenkunkuma yendalo. Ifomula esisiseko yemveliso iyahluka ngokuxhomekeka kuhlobo kunye nezinto zokwenza izinto. Izinto ezisisiseko zezi: umgquba wenkuku, umgquba wedada, umgquba weerisi, umgquba wehagu, ikati ...
Itekhnoloji yokuvumba yomgquba wenkuku wezichumiso
ngomphathi ku 2021-05-25
Kukwakho neefama ezinkulu ngakumbi nezincinci. Ngelixa zihlangabezana neemfuno zenyama yabantu, zivelisa isixa esikhulu semfuyo kunye nomgquba weenkukhu. Unyango olufanelekileyo lomgquba alunakusombulula kuphela ingxaki yongcoliseko lokusingqongileyo, kodwa luguqule inkunkuma. I-Weibao ivelisa ...
Iigusha zomgquba itekhnoloji yokuchumisa yobushushu
ngomphathi ku 2021-05-18
Isicwangciso semveliso yezichumiso eziphilayo
ngomphathi ku 2021-05-13
Iiprojekthi zorhwebo ezikhoyo zezichumiso eziphilayo azihambelani kuphela nezibonelelo zoqoqosho, kodwa zikwangqinelana nesikhokelo semigaqo-nkqubo yezolimo nokusingqongileyo kunye nokuluhlaza. Izizathu zeprojekthi yemveliso yezichumiso eziphilayo Umthombo wongcoliseko kwezolimo kwezolimo: i ...
Itekhnoloji yovundiso loMgquba weNkomo we-Organic Organic